EyeKhala 10, 2018 admin
100+ abarhwebi ziya kukwazi kwetyala Bitcoin kaThixo Lightning Network nge CoinGate
Abarhwebi ngoku inyathelo elinye ukusondela ukuba nako ukwamkela Bitcoin iintlawulo nge Lightning Network.
processing Intlawulo qalisa CoinGate waqalisa inkqubo yolingelo eza kwenza ukuba 100+ abarhwebi kwetyala kuguqulelo Lightning-enabled zenkonzo yawo.
Njengoko inkonzo standard CoinGate kaThixo, inkampani baza kusebenza crypto-to-eyake exchange. Ngaphezu, i pilot entsha inzuzo ukuyigubungela iindleko mali kumele ezilahlekileyo ngenxa ekuqaleni-isigaba nohlobo software, Ukusetyenziswa Lightning ngoku ubukhulu becala in beta.
bank yotyalo-Czech ukhulisa $ 100m ukuze fund blockchain
Benson Oak, i bank utyalo-mali esekelwe e Prague, Umphakathi waseCzech, ubhengeze ukuba ukhulisa $100 million ukuba asungule mali elungiselelwe emarikeni Israeli investment kunye nokuthatha ingqwalasela zokuqala blockchain.
Ingalo entsha investment, ebizwa Benson Oak Ventures, sele elihambisana $25 million kwaye ijolise ukufikelela $100 million target ekupheleni 2018.
Ngokutsho Benson Oak Ventures’ website, mali iya kuba nomdla kakhulu zokuqala blockchain ezifundisa iimveliso abathengi okanye ekudaleni amaqonga ukuba bakwazi ukukhula uluntu, zonke kwiinzame ukunyusa ukusetyenziswa blockchain kule kwinqanaba yabathengi.
Bancor uya ukuvuza kweintanethi okulandelayo
platform exchange Crypto Bancor iye abusekho intanethi kulandela “ulwaphulo lokhuseleko” esenzeka kusasa ngoMvulo.
Ilahleko evela lomnqweno yimfumba kuthiwa ukuba $ 23.5M.
Bancor ukuba ubhale ukuba iqonga wayo ngoku intanethi.
Namhlanje ekuseni (BST) Bancor wazibonela ulwaphulo yokhuseleko. Akukho izipaji umsebenzisi ziye engozini. Ukugqibezela uphando, siye bafudukela ukulungiswa kwaye iza kukhupha ingxelo eneenkcukacha kungekudala. Sijonge phambili ekubeni emva intanethi ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka.
— Bancor (@Bancor) EyeKhala 9, 2018
UK egadile yamkela zokuqala yokuqala crypto ukuba ibhokisi yesanti kulawulo
Kuba okokuqala komlawuli-mali i-UK kaThixo, i wokuqhuba Financial, ke ukuqaphela ngqo isakhono zokuqala ezinxulumene-blockchain ngokunika yesanti-ukufikelela 11 blockchain kunye neenkampani ezisasaziweyo kuhambelana-technology ileja.
“Siye baye bamkela iqela mveliso eziya ukuvavanya neziphakamiso eziphathelele cryptoassets. Kuya kusivuyisa kakhulu ukuba ukuhlola ukuba ingaba, kwindawo elawulwa, iinzuzo Umboleki zisiwe ngexesha ekulawuleni ngempumelelo iingozi ezihamba.”
yokulawulwa yesanti I Inombolo kaThixo yaphehlelelwa ngoJuni 2016 ngenjongo yokuvumela amashishini ukuba bahlole “iimveliso ezintsha, iinkonzo, Imifuziselo zoshishino kunye neendlela zokunikezelwa” emarikeni kunye isigunyaziso yethutyana Inombolo yakhe.
Banks e South Korea une $ 2B ngo crypto, kukugqala iklasi asethi asakhasayo
iibhanki Urhwebo South Korea ukuze yasenza kwi cryptocurrencies, ekubeni Bitcoin ngakumbi zingxoxo enkulu yasekhaya.
Ngokutsho South Korean iplagi iindaba, Yonhap, amaziko ezemali kweli lizwe babe phantse $2 billion ezixabisa cryptocurrencies.
Esi sixa zilingana kuphela 8% le iidipozithi zizonke abanini ngokwezindlu labarhwebi South Korea, leyo ulingana 26 yezigidigidi won. kunjalo, ibizwa kokuba ingxelo ukuba pesenti likhula yaye isithuba uthathwa i “lempahla asakhulayo.”
Ngaphezu, Shinhan, i enkulu kunazo 2 eKorea, liqulunqe isiqulathi Bitcoin ukuba abathengi.
Ingxelo Daily Market Kraken for 09.07.2018
$62.7M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje